Famaritana ny kalama
Ny rivotra dia zavamaniry isan-taona izay mitombo eny amoron'ny renirano, farihy, ala sy tany lemaka. Manana zavatra mahasoa maro izy io, noho izany dia ampiasaina ho an'ny tetika medikaly eo amin'ny vahoaka sy ny fanafody ofisialy.
Tombontsoa tena ilaina amin'ny ara-pahaizana ara
Ny toetran'ny toaka amin'ny aura dia manana vasodilating, sedation, antispasmodic, antimicrobial, tranainy ary fanadiovana. Manana tsindrona diérika, hemostatic ary tonic. Ny fampiharana tsy tapaka ny fananganana kalama dia manamafy ny fiasan'ny tsinay ary mampiroborobo ny tsiaron'ny tsimokaretina. Izany dia mampitombo ny fiankinan-doha sy ny asan'ny lehilahy. Ity fitaovana ity dia afaka manatsara ny asan'ny aty amin'ny fotoana fohy ary mampitombo ny tsiambaratelo.
Misaotra ireo toetra voatanisa ireo, ny tirojin'ny aura dia ampiasaina amin'ny:
ny aretina rehetra amin'ny rafi-pitabatabana;
fanaintainan'ny etiôlôjika tsy voafaritra mazava sy marary aretina hafa.
Ahoana no handraisana sy hampiharana ny fananganana kalama?
Azonao atao ny mividy tsimokaretina kalamika ao amin'ny pharmacy, ary afaka manao izany ianao.
Tincture prescription amin'ny prema anatiny
rhizomes of aira - 100 g;
alika - 500 ml.
Ahosoy ny rhizomes ary asio alikaola. Rehefa afaka 14 andro dia vonona hampiasaina ny vokatra.
Amin'ny vato ao amin'ny voa sy ny cholecystitis, ny tincture ny calamus amin'ny alikaola dia nalaina 30 isa isan-andro. Amin'ny aretim-pivalanana, ny poizina na ny taolam-paty, mila misotro rano 20 ianao, ary amin'ny fitsaboana angina - 15 sotro.
Ny fanoratana ara-ara dia mahasoa amin'ny nify ary afaka manala ny nify . Saingy tsy maintsy voatery hifantoka bebe kokoa.
Famoronana tavoahangy ho an'ny vava
rhizomes rhizome - 20 g;
Hetezo ireo rhizomes ary ampidino amin'ny vodka. Aorian'ny 14 andro dia mihena.
Miaraka amin'ny nify iray dia afaka 5 minitra ny vavanao.
Ahoana ny fakana ny tantely?
Tendrombohitra lava - famokarana medikaly
Herisetra amin'ny fitsaboana ny aty sy ny fanasitranana azy
Ny fitsaboana ny arthrôs amin'ny fitsaboana aretin-koditra
Fanafody ho an'ny holatra amin'ny tongotra
Fanafody volpoko ho an'ny vary orza
Fisotroana - toetra mahasoa sy fanoherana
Echinacea ho an'ny fiarovana
Maklura - fampiharana
Toaka - fanafodin'ny volokano
Olona camphor ho an'ny tarehy
Berry berry - toetra mahasoa
Gloxinia amin'ny ririnina
Manasitrana ny olombelona - ahoana no tokony hitondrany azy?
Firaisana taorinan'ny taom-pianarana
Ny kiraro ririnina ho an'ny vehivavy Nike
PV-panohanana eo amin'ny valindrihana
Artichokes - tsara sy ratsy
Keira Knightley - fomba
Wedding amin'ny Novambra - famantarana
Handbags Branded 2014
Satelika mody ho an'ny vehivavy aorian'ny 45 taona
Sary mihetsika mafy
Modely Brooke Shields tamin'ny fahatanorany
Dingana sirrhose amin'ny aty
Kilasy energie an'ny vata fampangatsiahana
Endometritis - soritr'aretina
Ahoana ny fananganana ny gorodona ao amin'ny firenena?
Inona no zava-mahadomelina misakana ny fiterahana?